Miblaogy Am-pitoniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Oktobra 2017 4:25 GMT
Isaorana i Curt Hopkins ao amin'ny Kaomity ho fiarovana ireo bilaogera tamin'ny nanamarihany ny namoahan'ny Electronic Frontier Foundation ny torolàlana :Ahoana no hanoratana bilaogy am-pitoniana.
Raha maro amin'ireo sosokevitra no mifantoka amin'izay fomba hatao hisorohana ny fandroahana ao anatin'ny tontolo amerikàna sy eoropeàna tandrefana, dia resahan'ilay antotan-kevitra ihany koa ny olana momba ny fomba hanoratana bilaogy avy any amin'ireo firenena izay mety hiteraka olana maro ho anao.
Hita anatin'ireo rohy ilaina ny tranonkala Tor an'ny EFF, toerana ahafahanao mianatra momba ny “onion routing.” Manana Wiki teknikany tranonkala Tor, ka ao no afaka mifanampy ireo mpampiasa tsirairay an'io fitaovana io.
Manana hevitra lalindalina kokoa na sosokevitra mba hanoratana am-pitoniana ny bilaogy ve? Aza misalasala miditra amin'ny faritra natao ho an'ny fanehoankevitra etsy ambanin'ity lahatsoratra ity dia mizara azy ireny.